Diyaarad aan heybteeda la aqoonsan oo ku xadgudubtay aag aan duulimaad loo ogoleyn… – Hagaag.com
Diyaarad aan heybteeda la aqoonsan oo ku xadgudubtay aag aan duulimaad loo ogoleyn…
Diyaarad aan haybteeda la aqoonsan ayaa ku xad-gudubtay hawada Maraykanka ee Caasimada Washington Talaadada maanta, taasi oo keentay in la xiro Aqalka Cad iyo in loogu dhawaaqo xaalad deg deg ah Aqalka Congress-ka (Capitol).
Diyaaradda ayaa soo gashay aag aan duulimaad loo ogoleyn oo ku taal caasimada Mareykanka, Washington, taasoo horseeday kulan loogu magac daray “Shirka Dhacdooyinka Qaranka” kaasi oo ay ku kulmaan qaar ka mid ah saraakiisha Amniga Qowmiga oo heer sare ah si ay ula socdaan inta lagu jiro xaalada nabadgelyo xumo, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan waaxda gaashaandhigga.
Sarkaal Mareykan ah ayaa sheegay inaysan caddeyn inay diyaaradda aheyd mid “cadow”ah.
Sababta ka gudbida aag aan diyaaradaha loo ogoleyn ayaa keentay in Aqalka Cad muddo gaaban la xiro, ka hor inta aan lagu dhowaaqin qaadista xayiraada, sidoo kale waxaa xaalad deg deg ah loogu dhowaaqay Aqalka Congresss-ka, mar dambena waa la qaaday.
Taliska Militariga ee Woqooyiga Mareykanka ayaa ku dhawaaqay in diyaarad ku baxday xaaladaasi si ay ula socoto xaalada, halka saraakiisha Mareykankana ay la socdaan xaalada, iyagoo aan bixin faahfaahin dheeraad ah.